Jabiyaha Taxanaha KB
· H Nooca Jabiyaha
·S Nooca Jabiyaha
Jebinta Taxanaha TOR
S Nooca Jebiye
Lammaanaha Degdegga ah
Habka kala soocida ee jabiyaha hydraulic
Waqtiga boostada: 11-10-2021
Habka kala-soocidda ee qalabka hawo-qaadista sida waafaqsan qaabka hawlgalka: jejebiyeyaasha hydraulic waxay u qaybsan yihiin laba qaybood: gacanta iyo hawada; sida ku cad mabda'a shaqada: jejebiyeyaasha hydraulic waxay u qaybsan yihiin saddex qaybood: biyo buuxa, hydraulic iyo gas la isku daray iyo nitr ...Akhri wax dheeraad ah »
Sida loo isticmaalo dubbe qodista si looga fogaado waxyeelo
Waqtiga boostada: 11-03-2021
Sida loo isticmaalo dubbe qodista si aad isaga ilaaliso burbur 2. Ha u isticmaalin jejebiyeyaasha hawo-qaadista si aad godadka ugu goysid qaababka dhagax adag. , Jabiyuhu ma shaqayn karo jabiyaha marka baastada...Akhri wax dheeraad ah »
Baaxadda codsiga ee furayaasha wareegga furan
Waqtiga boostada: 10-26-2021
Oktoobar 26, 2021, Baaxadda codsiga jabiyaha nooca furan waxay ku habboon tahay xakamaynta iyo ilaalinta saddexda weji ee AC 40.5KV gudbinta korantada iyo nidaamka qaybinta, waxaana sidoo kale loo isticmaali karaa munaasabada isku xirka wareegtada iyo wareejinta isku darka capacitor....Akhri wax dheeraad ah »
Mabda'a shaqada ee dubbe hydraulic
Waqtiga boostada: 10-20-2021
Dubeyaasha Haydarooliga waxay ka tirsan yihiin dubbayaal ururinta aasaaska saamaynta. Marka loo eego qaab-dhismeedkooda iyo mabda 'ahaantooda, soosaarayaasha dubbaha hawo-mareenka ah ayaa loo qaybin karaa hal shaqo iyo shaqo labanlaab ah. Si badheedh ah loo dhigo, nooca hal-saamaynta ahi waxa ay ka dhigan tahay in dubbe saamayntu si degdeg ah loo sii daayo ...Akhri wax dheeraad ah »
Mabda'a dubbe hydraulic
Waqtiga boostada: 10-08-2021
Oktoobar 8, 2021, dubbayaasha haydarooliga ayaa ah dubbayaal wax-soo-saar leh, kuwaas oo loo qaybin karo noocyo hal-jilid ah iyo kuwo laba-jilaa iyadoo loo eegayo qaab-dhismeedkooda iyo mabda'a shaqada. Nooca loogu yeero hal jilitaanka macnaheedu waa in xudunta dubbe ee saamaynta si dhakhso ah loo sii daayo ka dib markii loo qaado ...Akhri wax dheeraad ah »
Maxaa loo baahan yahay in la hubiyo ka hor inta aan la isticmaalin burburiyaha dhagaxa?
Waqtiga boostada: 09-22-2021
Sebtembar 22, 2021, maxaa loo baahan yahay in la hubiyo ka hor inta aan la isticmaalin burburin dhagaxa? 1. Qaybaha qalabka shaqada ka hor, waa in aan hubino in dhammaan qaybaha qalabka burburinta dhagaxa ay dabacsan yihiin, si looga fogaado ifafaale aan caadi ahayn inta lagu jiro shaqada. 2. Saliid Si joogto ah u hubi saliidda saliidda ee ku jirta th...Akhri wax dheeraad ah »
Falanqee mabda'a shaqada ee sanduuqyada wareegga wareegga
Waqtiga boostada: 09-13-2021
Sebtembar 13, 2021, Falanqee mabda'a shaqada ee nooca sanduuqa jebiyayaasha wareegga wareegga wareegga guud ahaan waxay ka kooban yihiin nidaamka xiriirka, nidaamka daminta, habka hawlgalka, cutubka safarka, qolofka iyo wixii la mid ah. Marka wareegga gaaban uu dhaco, goobta birlabku waxay dhalisaa qulqul weyn (genera ...Akhri wax dheeraad ah »
Horumarinta iyo dayactirka burburinta dhagaxa
Waqtiga boostada: 09-07-2021
Sebtembar 7, 2021, horumarinta dhagaxyada dhagaxyada ayaa inta badan ka muuqda dhinacyadan soo socda: 1. Awoodda suuqa ee burburiyaha waddankeygu waa mid aad u ballaaran, waxaana si xooggan uga welwelsanaa shirkadaha soo saara burburinta dhagxaanta. Intaa waxaa dheer, xawaaraha beddelka ee ...Akhri wax dheeraad ah »
Isticmaalka saxda ah ee Hammer Hammer
Waqtiga boostada: 08-31-2021
Hadda u soo qaado taxanaha S ee Hammer Hydraulic Hammer si aad u muujiso sida saxda ah ee loo isticmaalo biyo jabiyaha. 1) Si taxaddar leh u akhri buug-gacmeedka hawo-qaadiyaha si aad uga hortagto waxyeello soo gaadha jabiyaha hawo-qaadiyaha iyo qodista, oo si hufan ugu shaqee. 2) Kahor hawlgalka, hubi ...Akhri wax dheeraad ah »
Dubbada Haydarooliga si sax ah ma loo isticmaalay?
Waqtiga boostada: 08-24-2021
Ogosto 24, 2021, dubbaha hadhiyaha si sax ah ma loo isticmaalay? Dube-biyoodku wuxuu inta badan ka kooban yahay qaybaha soo socda: madaxa dubbe / jir dube / dubbe madaxa dhululubo qaadis iyo wixii la mid ah. Madaxa dubbaha waxaa lagu rakibay biraha hagaha toosan ee fareemka tuulan si loo hubiyo xoog ku filan. Goorma...Akhri wax dheeraad ah »
Astaamaha isuduwidda kala duwan ee soosan breaker
Waqtiga boostada: 08-19-2021
1. Qodobbada saameynaya sifooyinka kala duwanaanshaha heerka isbarbardhigga Nidaamka Xiushan, sababtoo ah shuruudaha farsamo ee kala duwan ee xafiisyada korontada ku shaqeeya ee xulashada awoodda batteriga ee saldhig kasta, qaabka korontada ee shaashadda DC iyo cabbirka iyo xakamaynta ...Akhri wax dheeraad ah »
Sababaha heerkul sare oo guul darreysiga ah ee haydarooliga
Waqtiga boostada: 08-14-2021
Wax soo saarkeena iyo nolosheenna, waxaan inta badan isticmaalnaa qabsasha biyaha. Qabsashada Haydarooliga ayaa door muhiim ah ka ciyaara wax soo saarka warshadaha. Qabashada Haydarooliga waxay bedeli kartaa qabsashada gacanta iyo maaraynta, taas oo la odhan karo waa mid faa'iido leh. Xagaaguna waa kuleyl iyo kuleyl, qabsashada hydraulic waxay u nugul tahay guuldarrooyin. Maanta, aynu...Akhri wax dheeraad ah »
Hababka sii daynta caadiga ah ee dhagaxa dhagaxa hadhida-biyoodka
Waqtiga boostada: 08-07-2021
Ha dhayalsan dhibaatada dheecaanka ah ee dhagaxa dhagaxa hadhida. Ma ogtahay in cabbirka dekedda laga soo daayo ee hydraulic rock crusher ay go'aamiso cabbirka macdanta la jajabiyey iyo awoodda wax soo saarka qalabka? Sababo la xiriira xirashada iyo isbeddellada cabbirka walxaha looga baahan yahay...Akhri wax dheeraad ah »
Habka saxda ah ee hawlgalka ee hawo-qaadiyaha
Waqtiga boostada: 07-30-2021
Si taxaddar leh u akhri buug-gacmeedka hawo-mareenka-jareyaasha si aad uga hortagto waxyeello soo gaadha hawo-qaadiyaha iyo qodista, oo si hufan ugu shaqee. Hawlgalka ka hor, hubi inay furayaasha iyo xidhidhiyayaashu debecsan yihiin, iyo haddii uu jiro daadad ku jirta dhuumaha hawo-qaadista. Ha isticmaalin bred hydraulic...Akhri wax dheeraad ah »
Komac TOR42 hydraulic breaker ayaa ku habboon inuu ku habboon yahay qodista 40t.
Waqtiga boostada: 07-23-2021
Si ka duwan Taxanaha KB, Taxanaha TOR ee biyo-baxayaasha ayaa leh waalka xakamaynta nidaamka ilaalinta toogashada maran, isaga oo hubinaya in dubbaha qodista aanay waxyeello u geysan isticmaal aan habboonayn. Taxanaha TOR-ga waxa kale oo ay ka faa'iidaysataa in uu yeesho nidaam ku dhisan dufan oo toos ah oo kor u qaadaya waarta jabiyaha. Sida...Akhri wax dheeraad ah »
Hawlgallada u baahan in laga fogaado jabiyeyaasha
Waqtiga boostada: 07-15-2021
Marka aan isticmaalno jabiyaha, waa in aan si taxadar leh u akhrinnaa buug-gacmeedka qalliinka jabiyaha si aan uga hortagno burbur soo gaara jabiyaha iyo qodista, oo aan si hufan ugu shaqayno. Waa maxay hawlgallada ay tahay in uu ka fogaado hawl-wadeenku inta lagu jiro shaqada: 1. Ku shaqee gariir joogto ah Cadaadiska sarreeya iyo cadaadiska hooseeya.Akhri wax dheeraad ah »
Doorka burburinta dhagaxa ee khadka wax soo saarka dhagaxa
Waqtiga boostada: 07-09-2021
Waayahaan danbe bulshadu si xawli ah ayey u horumaraysaa, waxaana meelo badan lagu soo bandhigayaa dhagxaanta dadka lagu shido. Warshado badan ayaa u baahan burburinta dhagaxyada. Haddaba, maxay yihiin shaqooyinka burburinta dhagxaanta ee xariiqda wax soo saarka dhagaxa? Sharax guud ka sii macaamiisheena iyo saaxiibadayada. Qof kastaa wuu ogyahay...Akhri wax dheeraad ah »
Mabda'a shaqada ee jabiyaha qodista
Waqtiga boostada: 07-03-2021
Qolfoofka jabiyaha qodista waxa uu si buuxda u daboolayaa dubbaha, qolofkuna waxa ay ku rakiban yihiin walxo qoyan, kaas oo ka dhex abuura dubbaha jidhka iyo qolofka waxa kale oo ay yaraynaysaa gariirka qaadaha. Jebinta qodista waxa ku shaqeeya cadaadiska hydrostatic si uu u wado t...Akhri wax dheeraad ah »
Waqtiga boostada: 06-02-2021
Taxanaha Furukawa HB waa badeecada ugu qadiimiga ah uguna caansan ee leh sifada awooda joogtada ah, adkeysiga dheer iyo dayactirka fudud. In kasta oo moodelku hadda la cusboonaysiiyay oo lagu beddelay taxane F & FX, laakiin weli waa la soo saaray oo si ballaaran loo adeegsaday tiro aad u badan. GAAR AH...Akhri wax dheeraad ah »
Burburiyaha Haydarooliga ah ee loo maro giraanta Bushing Bushing
Waqtiga boostada: 05-21-2021
Bushings waxay hubisaa isku-habboonaanta saxda ah ee qalabka shaqada, marka baadiyaha gaaro xadka xirashada, waa la bedeli karaa si dib loogu soo celiyo qeexitaanka. Waxa aanu diyaar u nahay in aanu ku siino agabka hadhaaga jabiyaha ee lagu farsameeyay agabka tayada ugu sareeya iyo shaqada saraysa si loo hubiyo...Akhri wax dheeraad ah »
BISTON HAMBIYAHA HAYDRAULIC AH
Waqtiga boostada: 05-14-2021
PISTON for HYDRAULIC HAMMers piston Spare parts ee moodooyinka FURUKAWA, SOOSAN, EVERDIGM, MONTABERT, INDECO, GB, NPK, TEISAKU iwm. ...Akhri wax dheeraad ah »
Compactor Plate Hydraulic
Waqtiga boostada: 04-22-2021
Saxanka is haysta, saxan gariiraya, ama tamper, waxa uu leeyahay sariir weyn oo gariiraya waxana uu ku habboon yahay abuurista darajo, halka is haysta rammer uu leeyahay cag yar. Saxannada Haydarooliga ah waxaa loogu talagalay inay isku xidhaan ciidda, jeexjeexyada iyo godadka, iyo sidoo kale wadista iyo soo saarista p...Akhri wax dheeraad ah »
Waqtiga boostada: 04-14-2021
Qalabka madaxa hore ee qalabka wax lagu dhejiyo ee dubbaha jebiya
Waqtiga boostada: 04-01-2021
FURUKAWA SOOSAN MODEL: F22 F27 HB20G HB30G HB40G SB40 SB50 SB81 SB121 MADAXA HORE EE HYDRAULIC HAMMER Astaamaha: 1. Qalabka CrMo oo leh dhar dheer 2. Mashiinka CNC oo sax ah 5. ISO 9001...Akhri wax dheeraad ah »
Hyundai 'si ay u koraan Doosan Infracore'
Waqtiga boostada: 03-04-2021
Hyundai Heavy Industries ayaa xaqiijisay la wareegida Doosan Infracore ee KRW850 bilyan (€635 milyan). Iyadoo la-hawlgalayaasheeda, KDB Investment, Hyundai waxay saxiixday qandaraaska rasmiga ah si ay u hesho saamiga 34.97% ee shirkadda 5tii Febraayo, iyada oo siinaya maamulka maamulka shirkadda. Sida...Akhri wax dheeraad ah »
Bauma ConExpo India 2021 waa la joojiyay
Waqtiga boostada: 02-23-2021
Bauma ConExpo India 2021, oo ay ahayd inay dhacdo Abriil, waa la kansalay hubaal la'aanta socota ee uu abuuray masiibada. Bandhiga ayaa dib loogu dhigay 2022 magaalada New Delhi, iyadoo wali la xaqiijinayo taariikhaha. Qabanqaabiyaha xaflada Messe Munich International ayaa yiri, "Waxaa la xaqiijiyay in...Akhri wax dheeraad ah »
Shan Saadaal oo aan la saadaalin karin 2021
Maxaa u kaydsan warshadaha dhismaha? Sidee OEM-yada iyo shirkadaha kiraynta ay ula qabsan doonaan si ay si wanaagsan ugu adeegaan macaamiishooda? Sidee bay baahida macmiilku isu beddeshaa? Iyo marka ay jirto masiibo caalami ah - sidee bay u soo kabashadu u egtahay? Yaa soo bixi doona si xoog leh, sideese u yeeli doonaan? Isgaadhsiinta caalamiga ah prov...Akhri wax dheeraad ah »
Qodista yaryar: Cabbir yar, caan weyn
Waqtiga boostada: 01-18-2021
Qodista yaryar waa mid ka mid ah noocyada qalabka sida ugu dhaqsaha badan u koraya, iyadoo caannimada mashiinka ay u muuqato mid sii kordheysa. Marka loo eego xogta laga soo xigtay Cilmi-baarista Off-Highway, iibka caalamiga ah ee qodista-yar-yar wuxuu ahaa meeshii ugu sarreysay abid sannadkii hore, in ka badan 300,000 unug. Suuqyada waaweyn ee loogu talagalay mini...Akhri wax dheeraad ah »
Qandaraaslayaasha Maraykanku waxay filayaan in dalabku hoos u dhaco 2021
Waqtiga boostada: 01-10-2021
Inta badan qandaraaslayaasha Mareykanka waxay rajeynayaan in baahida dhismuhu hoos u dhacdo 2021, in kasta oo masiibada Covid-19 ay keentay in mashaariic badan dib loo dhigo ama la joojiyo, marka loo eego natiijooyinka sahanka ay sii daayeen Associated Contractors of America iyo Sage Construction iyo Real Estate. The perc...Akhri wax dheeraad ah »
Hyundai Heavy waxay xidhatay iibsashada Doosan Infracore
Waqtiga boostada: 01-03-2021
Mashiinnada dhismaha ee Doosan Infracore Isbahaysiga ay hogaamiso shirkadda dhismaha maraakiibta Kuuriyada Koonfureed ee Hyundai Heavy Industries Group (HHIG) ayaa ku dhow inay 36.07% ku hesho saamiga shirkadda dhismaha ee Doosan Infracore, ka dib markii loo doortay inuu yahay tartanka la door biday. Infracore waa mid aad u culus ...Akhri wax dheeraad ah »
Bauma Shiinaha ayaa soo sheegay 80,000 oo booqdayaal ah
Waqtiga boostada: 12-28-2020
Ku dhawaad ​​80,000 oo booqdayaal ah ayaa ka qayb galay bandhigga Buama China bishii hore ee Shanghai. Waxay ahayd hoos u dhac 62% ah 212,500 ee 2018, laakiin qabanqaabiyaha Messe München wuxuu sheegay inay ahayd natiijo wanaagsan marka la eego masiibada. Bandhiga waxaa si ba'an u saameeyay Covid-19, kaas oo u diiday dadka safarka ah ee ka imaanayay bannaanka o...Akhri wax dheeraad ah »
INTERMAT Paris 2021 waa la joojiyay, daabacaadda xigta ayaa la qaban doonaa 2024
Iyada oo ay ugu wacan tahay hubanti la'aanta badan ee ka dhalatay masiibada Covid-19 oo ay u badan tahay inay sii jirto qaybta hore ee 2021, qabanqaabiyeyaasha INTERMAT waxay qaateen go'aan laga xumaado oo lagu baabi'inayo daabacaadda oo lagu qaban doono 19 illaa 24 Abriil 2021 ee Paris , iyo in la abaabulo daabacaadda soo socota waxaan...Akhri wax dheeraad ah »
2020 5ta Shirkadood ee Macdanta Kanadiya ee ugu Wayn
Waqtiga boostada: 12-08-2020
By Investopedia Updated Noofa 16, 2020 Kanada waxay ka heshaa hantideeda in badan oo ka mid ah kheyraadkeeda dabiiciga ah, natiijaduna waxay leedahay qaar ka mid ah shirkadaha macdanta ugu waaweyn adduunka. Maalgashadayaasha doonaya inay la kulmaan waaxda macdanta Kanada ayaa laga yaabaa inay rabaan inay tixgeliyaan qaar ka mid ah xulashooyinka. Dabagalka...Akhri wax dheeraad ah »
Qiimaha macdanta birta ayaa ku socda
Macdanta News Pro - Qiimaha macdanta birta ayaa noqday mid aad u wanaagsan Jimcihii iyadoo baahida aan horay loo arag ee Shiinaha, saadka xaddidan ee Brazil iyo cilaaqaadka xun ee Canberra iyo Beijing ay gilgileen suuqa badda. Benchmark 62% Fe ganaaxyada loo soo dhoofiyo Waqooyiga Shiinaha (CFR Qingdao) ayaa isbeddelay...Akhri wax dheeraad ah »
Warshadaha mishiinada dhismaha ee Shiinaha ayaa ku faraxsan iibka xooggan ee 2020 laakiin aragtida lama hubo
Waqtiga boostada: 12-02-2020
SHANGHAI (Reuters) - Iibka mishiinnada dhismaha ee xoogga leh ee Shiinaha ayaa la filayaa inuu sii socdo ilaa ugu yaraan horraanta sanadka soo socda, laakiin waxaa laga yaabaa inay carqaladeeyaan hoos u dhac kasta oo ku yimaadda maal-gashiga kaabayaasha ee Beijing ee dhowaan, maamulayaasha warshadaha ayaa yiri. Sameeyayaasha qalabka dhismaha waxay la kulmeen lama filaan...Akhri wax dheeraad ah »
Iibka Shirkadaha Dhismaha-Mashiinada ayaa kor u kacaya soo kabashada dhaqaalaha Shiinaha
Waqtiga boostada: 11-20-2020
Iibka Mashiinnada Dhismaha-Dhismaha ayaa kor u kacaya soo kabashada dhaqaalaha Shiinaha By Bai Yujie, Luo Guoping iyo Lu Yutong Kormeerayaasha ayaa baaraya qodista ka hor inta aysan ka tagin warshad Zoomlion oo ku taal Weinan, gobolka Shaanxi ee Waqooyi-galbeed Shiinaha, Maarso 12. Saddexda shirkadood ee ugu sarreeya Shiinaha ee sameeya machida dhismaha. ..Akhri wax dheeraad ah »
Komatsu wuxuu lumiyay dhulkii Sany, isaga oo ka maqan kobcinta dhismaha Shiinaha
Waqtiga boostada: 11-13-2020
Qalabka cul culus ee Japan ayaa indhaha dhijitaalka ah ku eegaya markii ay xafiiltamaan ka dib markii coronavirus uu kor u qaaday saamiga Komatsu ee suuqa Shiinaha ee qalabka dhismaha ayaa hoos ugu dhacay 4% 15% toban sano gudahood. (Sawirka waxaa leh Annu Nishioka) HIROFUMI YAMANAKA iyo SHUNSUKE TABETA, qorayaasha shaqaalaha NikkeiMay 19,...Akhri wax dheeraad ah »
In ka badan 2,800 oo bandhigayaal ah si ay uga qaybqaataan BAUMA CHINA 2020
Waqtiga boostada: 11-11-2020
Diyaargarowga bauma CHINA 2020, oo ka dhacaya Noofambar 24 ilaa 27 ee Shanghai, ayaa si xawli ah ku socda. In ka badan 2,800 soo-bandhigeyaal ayaa ka qayb-qaadan doona bandhigga ganacsiga hormuudka u ah Aasiya ee dhismaha iyo warshadaha mishiinnada macdanta. In kasta oo caqabadaha ay sababeen Covid-19, bandhiggu wuxuu buuxin doonaa dhammaan 1...Akhri wax dheeraad ah »
Sidee loo ilaaliyaa qodista marka la isticmaalayo jabiyaha si looga fogaado waxyeelo soo gaadho qodista?
Waqtiga boostada: 05-11-2020
1. Mugga saliidda biyaha iyo wasakhowga Maadaama wasakhowga saliidda hydraulic uu yahay mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee bamka hydraulic-ga, waxaa lagama maarmaan ah in la xaqiijiyo xaaladda wasakhda ee saliidda hydraulic waqtigeeda. (Beddel saliidda biyo-biyoodka gudaha 600 saacadood iyo shaandhaynta walxaha 100 saacadood gudahood). Saliid la'aanta haydarooliga waxay ...Akhri wax dheeraad ah »
Sida loo xalliyo dhibaatada saliidda madow ee jejebiyeyaasha hydraulic
Waqtiga boostada: 03-12-2019
Biyo-jabiyaha Haydarooliga waxa uu noqday qalab shaqo oo muhiim u ah qodista biyaha. Dadka qaarkiis waxay sidoo kale ku rakibaan biriyeyaasha hawo-qaadista ee xamuulka dhabarka (sidoo kale loo yaqaan mashquul labada daraf) ama kuwa giraangiraha si ay u burburiyaan hawlgallada. Marka aad isticmaalayso mishiinka biyo-baxa ee qodista, waxaad ogaan doontaa in hydraulic-ga...Akhri wax dheeraad ah »
Waxa la iska ilaalinayo marka la isticmaalayo dubbaha hadhka:
Waqtiga boostada: 07-25-2018
Isticmaalka dubbe hydraulic waxaa jira arrimo badan oo saamayn doona hufnaantiisa shaqo, iyo xataa keeni dhaawac qaar ka mid ah, taas oo kiiska waa in aan ka fogaana qalliinka, si ay si fiican u ilaalin dubbe hydraulic? 1. Iska ilaali in aad ku shaqeyso xaalada gariir joogto ah Hubi in cadaadiska sare...Akhri wax dheeraad ah »
Sababaha hydraulic jebinta dubbaha garaaca soo noqnoqda qaladka:
Waqtiga boostada: 03-23-2017
Sida qalab aad u muhiim ah oo loogu talagalay qodista, dubbaha burburintu si wax ku ool ah ayuu uga saari karaa dhagxaanta sabaynaysa iyo ciidda dildilaaca dhagaxa. Isticmaalayaasha qaar ayaa sheegay in inta jeer ee shaqo joojinta ay khalad noqon doonto isticmaalka. Waa maxay sababta tani? Sababta ugu weyn ee xaaladdan keentay ayaa ah in usha lagu qodo...Akhri wax dheeraad ah »
Taleefanka: +86 535 6433353
Cinwaanka: No.183 Wadada Fenghuangshan, Degmada Fushan, Yantai, Shandong, Shiinaha
- Khariidadda goobta
Quful yar yar, Mini Excavator Grapple, Furukawa Hb40g, Hammer Rock Hammer, Log Grapple, Burburiyaha Haydarooliga ee Awooda leh,